संघीय संरचना अनुसार केन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहने
मंगलवार पौष ११ २०७४ लुअप
काठमाडौं- संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयहरुको संरचनागत खाका तयार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिलाई बुझाएको खाका अनुसार स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका महाशाखा र शाखा रहनेछन् ।
संघीय संरचना अनुसार केन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहने र प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने लगभग पक्का भइसकेको छ । सोही आधारमा तयार पारिएको संरचनागत प्रस्ताव अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिका कार्यालयमा स्वास्थ्यको छुट्टै महाशाखा हुने छ भने नगरपालिका र गाँउपालिकामा स्वास्थ्य शाखाका रहने छ।
प्रस्तावित खाका अनुसार महानगर र उपमहानगरको स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत ४ वटा शाखा र नगरपालिका अन्तर्गतको शाखामा ३ वटा इकाइ र गाँउपालिकाको शाखा अन्तर्गत २ वटा इकाइ रहने छन् ।
प्रस्तावित संरचना अनुसार स्वास्थ्यका यी महाशाखा तथा शाखामा लेखा, प्रशासन, जनशक्ति व्यवस्थापन, आपूर्ती तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्टै इकाइ रहनेछैन । यसका लागि महाशाखा तथा शाखाले आवश्यकता अनुसार महानगरदेखि गाउँपालिका कार्यालयको इकाइलाई प्रयोग गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित संरचनाको इकाईमा नर्सिङ तथा मिडवाफ्रीलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसअघि नर्सहरुले नर्सिङ विषयलाई छुट्टै समावेश नगरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
होलीमा प्रयोग हुने रङले आँखामा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्छ सक्छ? कसरी जोगिने?
भाइरल प्रभावित ४५८ जनाको उपचार, राेग पत्ता लगाउन नमूना संकलन
एलर्जीको कारण रुघाखोकी लाग्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यस प्रकार छन्
भक्तपुर नगरलाई सफा, स्वच्छ र सुन्दर बनाउने अभियान अघि बढ्दै
महोत्तरी गौशाला नगरपालिकामा निःशुल्क आँखा शल्यक्रिया आयोजना
बन्द कोठामा हिटर प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि खतरनाक